MIVANTANA amin’ny 7 Aprily: Krizy ara-pahasalamana iray hafa – mandrava ny fady amin’ny fanalan-jaza · Global Voices teny Malagasy
Halefa mivantana amin'ny YouTube, Facebook ary Twitch ny resadresaka anjotra
Voadika ny 03 Avrily 2021 4:52 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, polski, Ελληνικά, English
Tsy ny valan'aretina COVID-19 ihany no mandrahona ny fahasalaman'ny olona fa misy iray hafa efa ela kokoa. Amin'ity Andro Manerantany ho an'ny Fahasalamana ity, andao hofongarintsika ireo lohahevitra fady momba ny fitondrana vohoka tsy niriana sy ny fanalan-jaza tsy azo antoka.
Tsy zavatra kely izany any amin'ny toerana izay tsy mbola maha ara-dalàna ny fanalan-jaza, izay raha tsy azo antoka dia miteraka fahafatesan'olona manodidina ny 30.000 isan-taona, sy fahasarotana ara-pahasalamana maro.
Fanalan- jaza miisa 73 tapitrisa eo ho eo no mitranga manerantany isan-taona, ary ny iray ampahatelony farafahakeliny no mampidi-doza. “Vehivavy manodidina ny 7 tapitrisa no miditra hopitaly isan-taona any amin'ny firenena an-dàlam-pandrosoana, vokatry ny fanalan-jaza tsy azo antoka”, hoy ny tatitra nataon'ny Fikambanana Erantanin'ny Fahasalamana (OMS). Any amin'ny toerana sasany, mety hampiditra am-ponja ihany koa ny fanalan-jaza.
Miaraha aminay amin'ny Andro Manerantany ho an'ny Fahasalamana, ny 7 Aprily, hanatrika ny fandaharana farany indrindra momba ny andiana resadresaka an-tserasera Global Voices Insights mivantana, izay ahitana ireo mpamelabela-kevitra avy any Brezila, Oganda, Polonina, Pakistan, ary Thailandy hiresaka ny zo ara-pananahana any amin'ny fireneny avy.
Hanomboka amin'ny 1 ora tolak'andro GMT (amin'ny 10 ora maraina any São Paulo / amin'ny 3 ora hariva any Varsovia / amin'ny 4 ora hariva any Kampala / amin'ny 6 ora hariva any Lahore / amin'ny 8 ora hariva any Bangkok ) ny fotoam-pivoriana, izay hotontosaina amin'ny teny Anglisy ary atolotr'i Melissa Vida, toniam-paritra ho an'ny Global Voices Amerika Latina. Tsindrio ity rohy ity hamantaranao ny ora any amin'ny faritra misy anao.
Maimaimpoana ity fivoriana ity ary misokatra ho an'ny besinimaro, ary halefa mivantana amin'ny Facebook Live, YouTube ary Twitch.
Ireto ny mpandray anjara:
Brezila: Debora Diniz, antrôpôlôgy Breziliana mamolavola tetikasam-pikarohana momba ny bioetika, ny feminisma, ny zon'olombelona ary ny fahasalamana. Mampianatra ao amin'ny Oniversite Brasilia, mpikaroka ao amin'ny Oniversite Brown, ary mpikatroka mafana fo ho an'ny zo ara-pananahana. Nahazo mari-pankasitrahana nasionaly sy iraisam-pirenena marobe ny fanadihadiana nataony momba ny fanalan-jaza, ny fanambadiana mitovy, ny fanjakana laika ary ny sela fototra ary naseho tamina fifaninanana maro.
Oganda: Joy Asasira, fanta-daza amin'ny Fiarovana ny Fahasalamana momba ny Fanabeazana Aizana Afrikana, ny Zon'olombelona, sy ny Miralenta ary mpamolavola tetikady miaraka amin'ny fisoloana vava manerantany, ny fanentanana ary ny fananganana hetsika sy ny fandrindrana. Notoloran'ny Uganda Law Society ny loka tsara indrindra ho an'ny Vehivavy mpiaro ny zon'olombelona i Joy tamin'ny taona 2018/2019 ary nekena ho vehivavy misandratra ho an'ny Fahasalamana Manerantany tao amin'ny Fivoriambe Ara-pahasalamana Manerantany ho an'ny Vehivavy Mpitarika (2017) tao amin'ny Oniversite Stanford.
Thailandy: Emilie Palamy Pradichit, mpanorina sady talen'ny Orina Mpanasoa Manushya, izay naoriny tamin'ny taona 2017 (midika hoe ‘Olombelona’ amin'ny teny Sanskrit ny Manushya ), manana tanjona hanamafisana ny fahefan'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana, indrindra ireo mpiaro ny zon'ny vehivavy mba ahafahan'izy ireo miady ho an'ny zony, ny fitovian-jo ary ny rariny ara-tsosialy. Mpisolovava iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona izy ary manam-pahaizana manokana amin'ny fanomezana fitsarana ara-drariny ho an'ny vondrom-piarahamonina voahilikilika.
Pakistan: R Umaima Ahmed, mpanao gazety mahaleotena. Vao haingana izy no Toniandahatsoratra Mpiara-miasa An-tserasera tao amin'ny The News on Sunday sy ny The Nation Newspaper. Manana traikefa folo taona eo amin'ny fanoratana votoaty, famoahan-dahatsoratra ary ny fampitam-baovao ao an-toerana amin'ny aterineto sy ny fampitam-baovao vahiny izy. Ny fiarovana nomerika, ny olan'ny vehivavy ary ny zon'ny biby no hifantohany. Mpandray anjara ato amin'ny Global Voices izy.
Polonina: Dominika Lasota, mpikatroka mafana fo amin'ny fiarovana ny toetrandro, 19 taona avy any Polonina; Mpandray anjara amin'ny hetsika Fridays For Future sy ny Women's Strike.
Manantena izahay fa hiaraka aminay ianao amin'ny 7 Aprily amin'ny 1 ora tolakandro ora GMT ( tsindrio ity rohy ity raha hanova ny ora any amin'ny faritra misy anao)!